Ampidino ny GDPS Editor Apk ho an'ny Android [Lalao mpanonta] - Luso Gamer
Amin'izao fotoana izao dia lasa malaza eo amin'ny mpilalao ireo lalao vaovao ireo noho ny traikefa milalao milamina. Ary mandany toerana kely sy loharanon-karena raha oharina amin'ny lalao hafa azo tratrarina amin'ny Internet. Androany eto dia nitondra ity lalao vaovao antsoina hoe GDPS Editor ity ihany koa izahay.
Ny hevitra ampiasaina eto amin'ny lalao dia tsy mitovy amin'ny hafa. Na dia azontsika atao aza ny manome toky ireo mpilalao fa misy endri-javatra azo tratrarina ao anatiny Lalao 2D dia samy hafa sy miavaka. Ankoatr'izay, tsy afaka mahita endri-javatra mitovy amin'izany isika ao anatin'ny lalao hafa.
Na dia miezaka mafy aza ny mpamorona hitantana zavatra araka ny tokony ho izy amin'ny alàlan'ny fanolorana ity customizer studio mivantana ity. Eto ambany eto isika dia hiresaka lalina ireo antsipiriany ireo miaraka amin'ireo dingana ilaina rehetra. Raha vonona ny hilalao ny andraikitry ny robot ianao dia misintona lalao avy eto.
Inona ny GDPS Editor Apk
GDPS Editor App dia fampiharana lalao tokana vao haingana novolavolaina. Izay ahafahan'ny mpilalao mankafy ny famitana ambaratonga samihafa efa voafaritra mialoha miaraka amin'ny sakana sarotra. Ho fanampin'izany, ny mpilalao lalao dia afaka manorina ambaratonga vaovao amin'ny alàlan'ny studio mivantana.
Fampiharana lalao an'arivony no narafitra sy nampidirina eny an-tsena. Ny ankamaroan'ny lalao dia maneho ny tanjona hamita ny ambaratonga. Ankoatra izany, ny lalao mavesatra azo tratrarina dia heverina ho mahafinaritra ny milalao. Saingy mandany toerana sy loharano bebe kokoa.
Noho ny fanjifana loharanon-karena be dia be, manomboka mitady lalao maivana ny mpilalao. Sarotra ny milalao ary mandany loharanon-karena vitsy kokoa. Ny ampahany ambany amin'ireo lalao 2D tsotra ireo dia manolotra endri-javatra sy safidy voafetra.
Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity dia niverina tamin'ity lalao mahafinaritra ity ny manam-pahaizana. Aiza no ahafahan'ny mpilalao milalao maody sy ambaratonga maro. Ankoatra izany, ny mpilalao dia afaka mamolavola ambaratonga samihafa amin'ny fampiasana studio. Noho izany dia vonona ny hankafy ny lalao ianao dia misintona rakitra Apk farany maimaim-poana.
anarana GDPS Editor
Developer Geometry Jumplite
Anaran'ny fonosana com.gdpsedi.geometryjumplite
SOKAJY Games - Arcade
Ny dingana fametrahana sy filalaovana lalao dia heverina ho tsotra. Voalohany, angatahina ny mpilalao mba hisintona rakitra fampiharana lalao vaovao avy eto. Avy eo apetraho ao anaty smartphone ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fomba mahazatra taloha.
Rehefa vita ny fametrahana dia afaka mankafy ny lalao amin'ny fomba samihafa miaraka amin'ny sakana mampihomehy ny mpilalao. Ny haavon'ny lalao efa nomanina mialoha dia heverina ho sarotra ny hilalao sy handresy. Satria ireo dia voarafitra mampiasa sakana sarotra.
Na ny mpilalao aza dia mila mandingana ireo sakana tsy nampoizina samihafa ireo. Raha vao jerena dia tsy azo vinaniana ny hitsara azy ireo. Saingy ny fiezahana imbetsaka dia mety hanampy amin'ny famitana mora foana ireo sakana ireo. Ny ampahany tsara indrindra dia ireo ambaratonga ireo dia azo ovaina.
Eny, afaka manova mora foana ny sarintany sy ny rafitra amin'ny alàlan'ny studio mivantana ny mpilalao. Ampiharo fotsiny ny drafitra ary mahazo fidirana mivantana amin'ny singa mora. Hatramin'izao dia tsy afaka manatri-maso na inona na inona izahay mba hisorohana ny lalao amin'ny fametrahana sy filalaovana.
Ny hitanay teto dia azo lalaovina amin'ny fitaovana android rehetra. Na mampiasa ny finday farany indrindra ianao na ny taloha. Ny fampiharana lalao dia mifanaraka tanteraka ary azo lalaovina amin'ny toe-javatra rehetra. Raha vonona ny hilalao sy hamolavola ambaratonga samihafa ianao dia apetraho ny GDPS Editor 2.2 Download.
Mora milalao sy mametraka.
Ny fametrahana ny mpilalao dia manome ireo ambaratonga samihafa ireo.
Aiza no ahafahan'ny mpilalao mankafy fomba samihafa.
Ahitana ambaratonga samihafa miaraka amin'ny safidy namboarina.
Midika izany fa afaka manova ny endri-javatra ny mpilalao.
Izany dia mamela ny mpilalao hanova ny endri-javatra fototra.
Ny crédit sy ny safidy hafa ilaina dia azo tratrarina ihany koa.
Ahoana ny fametrahana GDPS Editor 2.2 Apk
Na dia tsy azo idirana amin'ny Play Store aza ny fampiharana lalao. Na dia tsy navoaka tamin'ny loharano samihafa aza. Na dia eo aza ny fahafaha-manatratra voafetra, mbola mahomby ihany ny lalao amin'ny famarotana marika tsara.
Noho izany ny ankamaroan'ny mpampiasa Android mitady loharano hafa tsara indrindra. Aiza no ahafahan'ny mpilalao misintona ny rakitra Apk farany ho an'ny tena. Noho izany, mifantoka amin'ny fitakiana sy ny fangatahan'ny mpilalao, dia manome ny Apk miasa farany eto miaraka amin'ny safidy tokana.
Ny fampiharana lalao manokana atolotray eto dia novolavolain'ny antoko fahatelo. Midika izany fa tsy manana ny zon'ny mpamorona mivantana mihitsy izahay. Na izany aza, mifantoka amin'ny fanampian'ny mpilalao, dia efa nametraka ny lalao amin'ny fitaovana isan-karazany izahay ary nahita fa malama.
Taona maro ny gameplays hafa navoaka sy zaraina amin'ny tranokalanay. Mba hametrahana sy hankafizana ireo lalao hafa tsara indrindra dia apetraho ny rakitra Apk nomena. Anisan'izany ny Joy Pony Apk ary Bucket Crusher Apk.
Noho izany dia tia milalao lalao 2D ianao, nefa tsy mahita loharano tena izy. Aiza ny mpankafy misintona mora foana ity lalao navoaka farany maimaim-poana ity. Avy eo amin'ity lafiny ity, manoro hevitra ireo mpilalao izahay hametraka GDPS Editor Android ary mankafy traikefa tokana miaraka amin'ny studio mivantana.
Sokajy Arcade, Games Tags Lalao 2D, GDPS Editor, GDPS Editor 2.2 Apk, GDPS Editor Apk, GDPS Editor Download Post Fikarohana